Momba anay - Dongguan Senze Precision Hardware Co., Ltd.
Manana Tetikasa efa za-draharaha izahay, Injeniera, Teknika, Orinasa, ekipa aorian'ny varotra.Araka ny sary 2D, 3D anao dia hiezaka izahay hiara-miasa aminao ary hanome serivisy machining tsara kokoa sy tsara kokoa.Amin'izao fotoana izao, ny vokatray dia malaza manerana izao tontolo izao.
Senze dia nohamarinin'ny Rafitra fitantanana kalitao GB / T 19001-2016 idt ISO9001: 2015, manana fomba fanaraha-maso hentitra izahay miaraka amin'ny CMM sy VMS nafarana mba hahatratrarana ny fenitry ny kalitaon'ny mpanjifa.
Ny Kolontsainan'i Senze dia "QUALITE".Ny kalitao avo lenta, ny serivisy tsara, ny fandefasana haingana ary ny vidiny tsara no tanjonay.Manantena amim-pahatsorana ny hiara-miasa aminao amin'ny fananganana ny fandresena-fandresentsika.
1. Fanaraha-maso hentitra ataontsika mandritra ny fandidiana,
2. CNC mivadika machining, fikosoham-bary, 5-axis machining,
3. Amin'ny fotoana fandefasana (10-30days araka ny filaharana qty),
4. Ny baiko kely dia azo ekena sy voalamina tsara,
5. Ny vidiny mifaninana amin'ny kalitao tsara.
2. Injeniera machining CNC manokana,
3. tsindrona lasitra, Die cast lasitra,
4. Fanamboarana metaly, serivisy fanapahana laser,
5. Surface fitsaboana,
1.Mandrosoa CNC lathes machining foibe,
2. DMG 5 axis CNC machining foibe,
4. Masinina EDM/WEDM,
5.Mold--plastika / vy bobongolo fanompoana foibe,
6. VMS+CMM QC rafitra fitsapana.
milina fanontana 3D
Senze dia nohamarinin'ny Quality Management System GB/T 19001-2016/ISO9001:2015.Ho hentitra ny vokatra sy hijery ny entana rehetra araka ny fenitra.Ary afaka manao sonia ny NDA miaraka amin'ny mpanjifanay izahay mba hiarovana ny tetikasany.
1. Famaliana haingana, fifandraisana ary fitsaboana ara-potoana,
2. Matihanina sy manam-paharetana hahatonga ny mpanjifa ho faly sy maivamaivana,
3. Fonosana tsara mba hiarovana ny tsara,
4. Ny serivisy aorian'ny varotra ny rafitra dia ny hahatsapa ny fahafaham-po amin'ny mpanjifa.
1. Fanaterana haingana kokoa,
2. Tsara fanompoana,
3. Tsy misy MOQ takiana,
4. Azo atao ny ampahany misy fanorenana sarotra,
5. Isika no orinasa, afaka mifehy ny kalitao sy mitahiry ny vidiny.
Fizarana milina vy Robot Machining Parts Fizarana Masinina Lathing Custom Kojakojan'ny milina môtô Precis Machining Part Parts machining anodized